Jarmalka oo Maxkamadaynaya Muwaadin Soomaali ah – Radio Daljir
Jarmalka oo Maxkamadaynaya Muwaadin Soomaali ah
Febraayo 17, 2018 10:32 b 0
Ciidamada Ammaanka Dalka Jarmalka ayaa qabtay Muwaadin Soomaali ah oo looga shakisan yahay in uu xiriir la leeyahay argagixisada Alshabaab.
Dacwad ogayaal heer Federaal ah ayaa sheegay in ninkaan gacanta lagu soo dhigay Khamiisti isagoo ku sugnaa gobolka Hesse ee bartamaha Germany,kaasi oo magaciisa lagu soo koobay C/qaadir,sida ay qortay Wakaaladda wararka Mareykanka (AP) oo soo xiganaysa laamaha dacwad oogayaashaasi
Waxaaa ay soo saareen Dacwad oogayaasha bayaan ay ku sheegeen in muwaadin kaan lagu magacaabo Cabduqaadir uu wajahayo dembiyo culus ,marka loo fiiriyo shuruucda iyo nidaamka dalkaasi u yaala.
Waxaana la ogaaday inuu damacsana inuu dil ka geesto wadankaasi ama dambiyo kale oo la xiriira argagexisanimo.
Ninkani oo da’diisa lagu sheegay 20 sano jir ayaa waxaay ay sheegeen in uu gaaray dalkaasi Jarmalka sanadkii 2014tii ka dib markii uu ku fashilmay isku dayo uu ku doonayay in uu falal argagisixanimo uu ka geysto Soomaaliya Sanadkii 2012ka,xiligaasi oo uu ku biiray maleeshiyada Alshabaab.
Wabiga Shabeelle oo Biyo la’aan ah iyo Beeralayda oo cabanya (dhegayso)
QM oo ergay Cusub u magacawday dalka Yemen